आफुमाथी खुट्टा चढाएर के गर्दैछिन् महेन्द्रसिंह धोनीकी पत्नी शाक्षी ? तस्विर भयो भाइरल - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > खेल > आफुमाथी खुट्टा चढाएर के गर्दैछिन् महेन्द्रसिंह धोनीकी पत्नी शाक्षी ? तस्विर भयो भाइरल
आफुमाथी खुट्टा चढाएर के गर्दैछिन् महेन्द्रसिंह धोनीकी पत्नी शाक्षी ? तस्विर भयो भाइरल
May 12, 2020 May 12, 2020 GRISHI198
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको लकडाउनले गर्दा मानिसहरु धेरै फुर्सदिला भएका छन् । भारतीय पूर्व क्रिकेट कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीकी पत्नी साक्षी धोनीले पनि आफूलाई फेसनेबल बनाउने क्रममा सन्नी लियोनीको पोज देखाएकी छिन् ।
उनले फेसनयुक्त थुप्रै फोटोहरु सार्वजनिक गर्ने क्रममा एउटा ग्ल्यामर तस्वीरसमेत प्रदर्शन गरेकी छिन् ।टाइम्स अफ इन्डियाले साक्षीका २२७ वटा तस्वीर सहितको समाचार राखेको छ । धोनी अहिले भारतीय क्रिकेट टिममा छैनन् ।
विश्वपकपछि उनले भारतीय टिमबाट खेल खेलेका छैनन् । यही मौकामा उनकी श्रीमती साक्षीले पनि उनीसंग समय बिताउने अवसर पाएकी छिन् । सन् २००८ मा धोनीसंग डेटिङ गर्न थालेकी साक्षी र धोनीको सन् २०१० मा विवाह भएको थियो ।
धोनी भारतका सबैभन्दा सफल कप्तानमध्येमा पर्छन् । उनको नाममा धेरै कीर्तिमान छन् । उनकै नेतृत्वमा भारतले विश्वकप एक दिवसीय र टी–२० क्रिकेट जितेको थियो । धोनीकी पत्नी साक्षी सिंह अहिले चर्चामा छिन् । दुई दिनअघि साक्षीले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा एउटा फोटो पोस्ट गरिन् । पोस्टले दुई लाखभन्दा बढी लाइक पाइसकेको छ ।
तर यो तस्वीरका कारण उनले आलोचना पनि बेहोर्नुपरेको छ ।उनले छालाको रंग भएको ब्लाउज लगाएकी छन् र धेरै मानिसलाई यो चित्त बुझेन । यसलाई मानिसले अ-र्ध-नग्न तस्वीरका रुपमा बुझेका छन् । भारतीय परम्पराअनुरूप यो लुगा नभएको भनी उनको आलोचना भयो ।
तर केही अन्यले यो साक्षीको निजी छनोटको विषय भएकाले अरूले मतलब गर्नु नहुने भनी उनको बचाउ गरे । केही ट्रोलहरूले पोस्टबाट आफ्ना कमेन्ट डिलिट पनि गरेका छन् । साक्षीले चाहिँ कमेन्टको मतलब नगरिकन त्यही लुगा लगाएका थुप्रै तस्वीर पोस्ट गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली अब गीतकार, शिशिर योगीको संगीतमा गीत लकडाउनपछि रेकर्ड हुने